काखे बालक छोडेर ह’राएकी रुपा ८ दिनपछि यस्तो अवस्थामा भेटिइन् [भिडियो सहित] – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/काखे बालक छोडेर ह’राएकी रुपा ८ दिनपछि यस्तो अवस्थामा भेटिइन् [भिडियो सहित]
काखे बालक छोडेर ह’राएकी रुपा ८ दिनपछि यस्तो अवस्थामा भेटिइन् [भिडियो सहित]
काठमाडौं। मोवाइलमा धेरै कुरा नगर भनेर सम्झाउँदा सानो काखे बालक छोडेर हिडेको भनिएकी महिला फेला परेकी छन् । उनी घरवाट आफ्नो फुपुको घर गएर बसेको बताएकी छन् । उनको सानो साढे २ वर्षको छोरा पनि छ । दागंवाट रोल्पा विवाह भएकी रुपा घर्ती अहिले सार्वजनिक भएकी हुन् । उनी घर छोडेर हिडेको ९ दिन पछि घर फर्केर आएकी हुन् । रुपाको घर तर्फका परिवारले उनी माइतीको सम्पर्कमा रहेको आफुहरुलाई शं’का लागेको बताएका थिए । रुपा आफ्नो फुपुको घरमा गएर बसेको बताएकी छन्।
फुपुको घरवाट माइत फर्केर आएपछि उनको आमाले छोरी भेटिइन् भनेर ज्वाइलाई खबर गर्दा लिन नआएको बताएकी छन् । घरमा ट’र्चर भएका कारण सहन नसकेर फुपुको घरमा गएको बताएकी छन् । रुपा जसको घरमा गएकी थिइन् उनको मोवाइल नभएका कारण सम्पर्क गर्न नपाएको रुपमाको आमाले बताएकी छन् । हिँजो फुपुको घरमा खोज्न जाँदा उनी घरमै फेला परेको बताएकी छन् । फुपुको घरवाट माइती लिएर आएपछि उनका श्रीमान भने लिन नआएको रुपाले बताइन्।
उनी ह’राएको भनेर भिडियोमा सार्वजनिक भएपछि उनीहरुले प्रहरीमा पनि सम्पर्कमा राखेका थिए । फोन गर्दा तिम्रो छोरी कहाँ गएको हो, त्यसको प्रमाण सहित आउनुपर्छ भनेर श्रीमानले भनेको रुपाले बताइन् । प्रहरीले बोलाउँदा पनि नआएको रुपाको आमाले बताएकी छन् । उनले ज्याईलाई बोलाउँदा म तिमीहरुले आउ भन्दा आउने जा भनेपछि जाने हो र ? भन्दै जवाफ लगाएको रुपाको आमाले बताइन्।
श्रीमान लिन नआएपछि रुपा अहिले माइतीमा आएर बसेकी छन् । रुपालाई श्रीमानले कु’टपि’ट गर्ने गरेको माइतीमा आएर बताएकी छन् । विवाह भएको तीन महिना देखि कु’टपि’ट गर्न थालेको रुपाले आफुलाई बताएको आमाले बताइन् । ज्वा’ईले जाँ’डर’क्सी खाएर छोरीलाई यस्तो या’तना दिने गरेपछि छोरीलाई त्यसै नपठाउने दुवै पक्षलाई राखेर कुराकानी गर्न खोजेको भएपनि ज्वा’ई नआएको उनको भनाई छ।
कसैलाई फोन गर्न परे मेरो मोवाइलवाट गर भनेर श्रीमतीको मोवाइलको सिम निकालेर फालिदिए । दागंको घोराही उपमहानगरपालिका १९ नम्बर वडावाट रोल्पा विवाह गरेर गएकी रुपा घर्ती सानो काखे बालक छो’डेर हिडेकी हुन् । तर रुपाले भने आफुलाई श्रीमानले अनावश्यक शं’का गर्ने गरेको बताएकी छन् । मेरा आफन्त छन्, दाजुभाई र साथी पनि छन् । कसैसंग कुरा नै गर्न नहुने हो र ? आफ्नै फुपुको छोरासंग कुरा गर्दा पनि शं’का गरेर झ’गडा गर्छन,उनले भनिन्।
<iframe width=”717″ height=”323″ src=”https://www.youtube.com/embed/HAx63LIk7qY” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>